बे अगे बकाबो, संदिग्ध n ° 1, बर्खानेले मारेका थिए - Jeune Afrique - teles रिले
Baye Ag Bakabo, संदिग्ध n ° 1, Barkhane द्वारा मारिए - Jeune Afrique
जोसेफ बेटी असोमो कुटपिट गरेको पश्चिममा जान्छन् - Jeune Afrique
भाडामा लिनेहरू के गर्ने? - युवा अफ्रिका
एसडीएफले कर्नल बामकुईलाई धम्की र धम्कीको भर्त्सना गर्दछ ...
बे एग बकाबोको अनावश्यक फोटो। © DR / JA
फ्रान्सेली सैनिकहरूले दुई आरएफआई विशेष राजदूत घिसलाइन डुप्न्ट र क्लाउड भेरलोनको हत्याको मुख्य संदिग्ध बेअगे बकाबोलाई मारे। उत्तरी मालीमा एक अपरेसनको क्रममा उनी गोली हानी मारिए।
“उनीहरूको नाम घिसलाइन डुपुन्ट र क्लाउड भेरलोन थिए, तिनीहरू फ्रेन्च थिए, तिनीहरू पत्रकार थिए। नोभेम्बर २, २०१। मा उनीहरूलाई मालीमा अपहरण गरियो र इस्लामिक मघरेबमा अल कायदा आतंककारीहरूले हत्या गरे। उनीहरूको अपहरण र हत्याको आदेश दिने जिहादी नेतालाई बर्खाने सेनाले भर्खर मारेको छ। "
सामाजिक सञ्जालमा प्रसारित सन्देशमा, स्वर गम्भीर रहेको सशस्त्र बलका फ्रान्सेली मन्त्री फ्लोरेन्स पार्लीले बे बेग बकाबोको "तटस्थकरण", "एक्यूआईएमका कार्यकारी र अपहरणका लागि जिम्मेवार" र हत्याको घोषणा गरे। आरएफआई को दुई विशेष राजदूत को। "यसको तटस्थताले लामो प्रतीक्षाको अन्त्य गर्दछ" फ्रान्सेली मन्त्रीले जोड दिए।
बेली आग बकाबो जुन5तारिख मा उत्तरी मालीको अगुल्होक क्षेत्रमा बर्खाने सेनाका फ्रान्सेली सैनिकहरूको नेतृत्वमा भएको एक अपरेसनमा मारिए। मन्त्रीका अनुसार फ्रान्सेली सेनाले "आतंकवादी हमलाको तयारीको" पत्ता लगायो जसको उद्देश्य "चाँडियन बटालियनको मिनुस्माको कब्जा" थियो। चार आतंककारीहरू "हटाइए", अगबाकाबो लगायत।
यो लेख पहिलो पटक https://www.jeuneafrique.com/1187072/politique/assassinat-des-envoyes-speciaux-de-rfi-baye-ag-bakabo-le-suspect-n1-a-ete-tue -by मा देखा पर्‍यो -बारखाने /
TELES RELAY 55663 पोस्ट 1 टिप्पणी
भौंवका लागि क्यास्टर तेल: कसरी यसलाई गाढा बनाउन प्रयोग गर्ने - स्यान्ट प्लस म्याग
आन्तुलन सन्तुलन: के तपाईंले प्रोबियोटिक्स वा प्रीबायोटिक्स खानुहुन्छ? - स्वास्थ्य प्लस पत्रिका
Sdf फ्रिडोलिनको विरुद्ध कर्नल बामकुईको धम्की र धम्कीको निन्दा गर्दछ ...
अल्जेरिया-मोरोक्को: जब लामामरा र Hilale तरवारहरु पार